Programs – VOSWO Radio
Siday muujiyeen deraasaddaha u dambeeyay ee laga sameeyay, Gudniinka Fircooniga oo ah caado dhaqameed dalal badan laga isticmaalo, waxa uu heerkiisa isticmaalku Somaliland ka marayaa 99.8. Haddaba, waxaynu barnaamijkan ku falanqayn doonaa dhibaatooyinka kala gudan ee ay Haweenku kala kulmaan Gudniinka Fircooniga, caafimaad iyo maskax ahaan intaba, maxay diinta Islaamku ka qabtaa isticmaalkiisa?, heerka isticmaalkiisu
DHEGAYSO Barnaamijka ICH ee VOSWO: Barnaamij gaara oo ku saabsan Dhibaatooyinka ka horyimaada Gabdhaha Suxufiyiinta ah ee ka hawlgala Somaliland
Dhegaysteyaal, waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo fekrado khaldan ka haysta mihnadda Saxaafadda, kuwaasoo ay ka mid yihiin aragtiyo qofka shaqada Saxaafadda ku jira la maseeya Fanaanka ama qofka heesaaga ah ee bahda Fanka. Haddaba, dhegayste; farqi noocee ah ayaad aaminsan tahay inuu u dhexeeyo hawsha Fanka iyo tan Warbaahinta? Mawduucan waxaad ku maqli
DHEGAYSO Barnaamijka ICH ee VOSWO: Maxaad kala socotaa Duruufaha ku gedaaman ardayda Maqalka Naafadda ka ah ee Somaliland?
Dhegaysteyaal, waxa jira dhibaatooyin badan oo ay la kulmaan ama la nool yihiin dadka laxaadka naafadda ka ah ee ku sugan Somaliland, gaar ahaan kuwa maqalka naafadda ka ah. Magaalada Hargeysa waxa ka jira dugsi ay wax ku bartaan ardayda Dhegooleyaasha ah, kaasoo ay dhowaan ka qalinjebiyeen ilaa 60 arday oo gabdho iyo wiilal isugu
DHEGAYSO BARNAAMIJKA ICH ee VOSWO: Carruurta Darbi-jiifka oo ka hadlaya duruuftooda nololeed iyo noocyada dhibaatooyinka ay la kulmaan
Dhegaysteyaal, waxa jira carruur yaryar oo ku nool jidadka magaalooyinka Somaliland, gaar ahaan Hargeysa, kuwaasoo loo yaqaano Darbi-jiif. Carruurtan oo badi da’doodu u dhexayso 7 ilaa 14 jir, waxa aan shaki ku jirin in duruufta nololeed ee ay ku jiraan ay aad uga duwan tahay nolosha iyo fursadaha kale ee ay haystaan kuwa da’ ahaan
DHEGAYSO VOSWO RADIO: Falanqayn: Isbarbar-dhigga Fankii hore iyo ka xilligan ee Soomaalida
Dhegaysteyaal, todobaadkan waxaad barnaamijkeena ku maqli doontaan: Maxaa u dhexeeya Fankii hore ee Soomaalida iyo Fanka waqtigan casriga ah ee hadda la joogo? Sida ay bulshadu u kala xiiseeyaan Fankii hore, gaar ahaan waqtiyadii 1960-meeyadii, fankii dhexe ee 1980-yadii iyo ka waqtigan la joogo ee 2015; Maxay Fanaantii hore iyo Fanaaniinta cusub ee dhalinyarada ahi